बझाङमा पहिलाेपटक ‘एकल पुरुष’लाई पनि भत्ता ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार बझाङमा पहिलाेपटक ‘एकल पुरुष’लाई पनि भत्ता !
बझाङमा पहिलाेपटक ‘एकल पुरुष’लाई पनि भत्ता !
२०७६, १३ श्रावण सोमबार ०७:४४
महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, असहाय, बालबालिकाहरुलाई भत्ता दिने गरेको सबै ठाँउमा सुन्न सकिन्छ । तर बझाङको एउटा नगरपालिकाको वडाले भने एकल पुरुषलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न थालेको छ । जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर ७ ले यसरी पहिलोपटक जिल्लामा नै एकल पुरुषलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ ।
एकल पुरुषका विभिन्न समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका ७ वडामा रहेका एकल पुरुषलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइएको वडा अध्यक्ष हरिचन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नु भयो, “राज्यले एकल पुरुषका समस्या समाधान गर्नका लागि ठोस नीति र पहल अझै गर्न सकेन, सरकाले भत्ता दिने केही नागरिहरुजस्तै एकल पुरुषहरुले पनि निकै कठिन जीवन जिउने गरेको मैले देखेको छु, त्यसै कारण पनि एकल पुरुषलाई आफुले प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरेँ ।”
वडामा रहेका २७ जनालाई २ हजार ५ सयका दरले रकम वितरण गरिएको हो । स्थानीय सरकारले आफ्ना समस्या बुझेर एकल पुरुषलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएकोमा ६० वर्षीय पदमबहादुर बमले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई निरन्तरता दिनसके आफुजस्ता धेरैलाई राहत हुने थियो, स्थानीय सरकार बनेपछि केही सहज हुने र आफ्ना पिर मर्का यो सरकारले समाधान गर्ने आश गरेका थियाँै, आज आएर त्यो केही हदमा अनुभव गर्न पाएका छौँ ।”
उहाँले थप्नुभयो, “पहिले सिंहदरबार घरघर मा आउने कुरा हाँसो जस्तो लाग्थ्यो तर आज आफ्ना लागी सिंहदरबार साँच्चै आएछ भन्ने अनुभुति भएको छ ।” बृद्ध एकल पुरुषलाई सहज र आफुले जनप्रतिनिधिलाई बनाएर यो स्थानमा पुर्याउने आमाबुवालाई सेवा दिने यो कदम उठाएको पनि वडाअध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो । एकल पुरुषको घरदैलोमा नै गएर उक्त रकम वितरण गरेको उहाँको भनाइ छ ।
Previous articleधौलागिरी गाउँपालिकामा बालबिवाह न्युनीकरणको पहल
Next articleअपांगलाई दिइने मासिक भत्ता वृद्धि गर्न छलफल भइरहेको छ : मन्त्री थापा